Qarax Miino oo ciidamo ka tirsan Puntland lagula eegtay duleedka Boosaaso – STAR FM SOMALIA
Qarax Miino oo ciidamo ka tirsan Puntland lagula eegtay duleedka Boosaaso
Wararka ka imaanaya magaalada Boosaaso ayaa sheegaya in Kolonyo ay la socdeen ciidamo ka tirsan Puntland qarax miino lagula eegtay deegaanka Bali-qadar oo dhaca duleedka Boosaaso.
Sida ay sheegayaan wararka ciidamada qaraxa lagu weeraray ay ka yimaadeen magaalada Boosaaso, kuna sii jeeda Buuraha Galgala, halkaasoo saldhig u ah ciidanka Puntland.
Wararka qaar ayaa sheegaya inuu jiro khasaare soo gaaray ciidamada, balse wali ma cada halka uu gaarsiisan yahay khasaarahaas.
Maamulka Puntland ayaa ka gaabsaday weerarka lagu qaaday ciidankooda ku sugan aagga Buuraha Galgala.
Ciidamada Puntland ayaa dhowr jeer oo hore qaraxyo miino oo khasaare dhimasho iyo dhaawac dhaliyay waxaa lagula eegtay Buuraha Galgala, iyadoo mas’uuliyada weeraradaas ay sheegatay Al-Shabaab.
UN iyo AU oo isku khilaafsan qorshe lagu xirayo wadada garoonka diyaaradaha Muqdisho
Waxgaradka Gobolka Hiiraan oo kasoo hor jeestay Go’aankii IGAD kasoo baxay